I-Apple Watch 2 kufanele incintisane ngqo neGear S3 evela kwaSamsung | Ngivela kwa-mac
I-Keynote ka-Apple isivele imenyezelwe ngoSepthemba 7 ngo-19: 00 kusihlwa, isikhathi senhlonipho eSpain. Le Keynote kufanele imake ngaphambi nangemva kwemashi ka-Apple ngonyaka ozayo futhi lokho kungenxa yokuthi imikhiqizo izokwethulwa Banomsebenzi wokukhulisa ukuthengisa kanye nayo inzuzo yenkampani.
Njengoba usuvele uyazi, ngo-Agasti i-Samsung yethule i-flagship yayo elandelayo, i-Samsung Galaxy Note 7 ngokuqashelwa kwe-iris nezinye izindaba eziningi futhi namuhla kulapho izokwethula khona i-Galaxy Gear S3, inguqulo elandelayo ye-smartwatch yenkampani ezofika ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuthi i-Apple Watch 2 ye-Apple.
Namuhla IFA 2016 eBerlin. I-IFA ingenye yemibukiso yezobuchwepheshe ebaluleke kakhulu ebibanjelwe eYurophu futhi kulokhu eJalimane. Enye yezethulo ezibaluleke kakhulu kule ntambama kuzoba ngewashi elilandelayo le-Samsung, iGear S3, ukuthi umkhiqizi waseNingizimu Korea usevele umemezele ezimemo zakhe.
Le Gear S3 entsha iza ngesikhathi esifanele ukuqhudelana ngqo nalokho okucatshangwa ukuthi yi-Apple Watch 2 lokho kuzofika ngomhla ka-7 nge-iPhone 7 yalabo abavela kuCupertino. I-Apple iqinisekile ukuthi ibeke umsebenzi omningi wokuqinisekisa ukuthi imodeli elandelayo ye-smartwatch yayo ifika ezikhathini, kepha okumele sicacise ngakho ukuthi iSamsung izozama ukudlulisela ukunaka ewashini layo.
Kuze kube manje, i-Galaxy Gear eyehlukile eseyethulisiwe ayikafiki ngokuphelele kubasebenzisi futhi ukuthi ukuthengisa kwayo kuphansi kakhulu uma siyiqhathanisa nalokho i-Apple ekwazile ukuthengisa ngakho I-Apple Watch yamanje. Sizozinaka zonke izindaba ezethulwe namhlanje ntambama ukwazi ukuziqhathanisa ne-Apple Watch yamanje.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » I-Apple Watch 2 kufanele incintisane ngqo neGear S3 yakwa-Samsung